अन्तराष्ट्रिय विषयहरुमा बेइजिङसँग कुरा मिल्दैन, नयाँदिल्लीले दलाई लामा कार्ड प्रयोग गरिहाल्छ ।
२७ चैत, नयाँदिल्ली । चीनसँगको सम्वन्धमा तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा कार्डको प्रयोग भारतमा लागि नौलो विषय होइन । जब अन्य दुई पक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय विषयहरुमा बेइजिङसँग कुरा मिल्दैन, नयाँदिल्लीले दलाई लामा कार्ड प्रयोग गरिहाल्छ ।
उसो त यो विषय त्यति नौलो पनि होइन । तर, अहिले यो विषय दिल्ली र बेइजिङका अखबारहरुको मुख्य समाचार बनेका छन् ।
जब दलाई लामा भारतमा कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्, अथवा राजनीतिक भेटघाट गर्छन्, चीनले त्यसमा तत्काल विरोध गरिहाल्छ र त्यो केही समयपछि त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ ।
यसपटक दलाइ लामाको अरुणाञ्चल प्रदेशको भ्रमण पनि नयाँ होइन । सन् १९८० देखि २०१० को वीचमा लामाले पाँचपटक अरुणाञ्चल प्रदेशको भ्रमण गरिसकेका छन् । यस अगाडि पनि उनले सन् १९८३, १९९६, १९९७, २००३ र सन् २००९ मा अरुणाञ्चल प्रदेशको भ्रमण गरेका थिए ।
सन् २००९ को भ्रमणको समयमा पनि दुई देशका वीचमा यस्तै तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
तर, यसपटकको भ्रमणलाई चीनले गम्भीररुपमा लियो र उसले यसबाट द्वीपक्षीय सम्वन्धलाई असर गरेको बताइरहेको छ ।
यतिमात्र होइन, चीनको विदेश मन्त्रालयले त आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि गम्भीर कमद चाल्ने चुनौती समेत दिएको छ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले भारतीय राजदुतलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर विरोध गरेको छ । तर, भारतले भने विशुद्ध धार्मिक भ्रमणलाई चीनले ‘कलर’ दिएको र कृत्रिम विवाद सिर्जना गरेको बताएको छ ।
यसका पछाडि केही कारणहरु छन् । पहिलो, यसपटकको दलाइ लामाको भ्रमणलाई भारतले निकै महत्व दिएको छ । अनि त्यही मात्रामा प्रचार-प्रसार समेत गरेको छ ।दलाई लामाको भ्रमणमा भारतले सरकारका एक मन्त्रीलाई समेत पठाएको छ र भ्रमणलाई निकै तामझाम बनाएको छ । अरुणाञ्चल प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत लामाको भ्रमणलाई तामझाम बनाउन खटेका छन् ।
भारतले दलाइ लामाको भ्रमणलाई विशुद्ध रुपमा धार्मिक हिसावले हेर्न आग्रह गरिरहेको छ भने चीनले यसलाई राजनीतिक बनाइएको दाबी गरेको छ । चीनले विवादित भूमि अरुणाचञ्चल प्रदेशमा भ्रमण गर्नु आफैंमा राजनीतिक भएको बताएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा लामाको सो भ्रमणले चीनको राष्ट्रिय स्वार्थमा आक्रमण भएको बताएको छ ।
लामा भन्छन्- हामीले छुट्टै राज्य खोजेका छैनौं
उता दलाई लामा आफैंले भारतले आफूलाई कहिल्यै पनि बेइजिङको विरुद्धमा प्रयोग नगरेको बताएका छन् । उनले तिब्बतलाई स्वशासन तथा स्वायत्तताको अधिकार प्रदान गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले छुट्टै मुलुकको स्वतन्त्रता खोजिरहेका छैनौं, हामी चीनभित्र नै बस्न चाहान्छौं,’ लामाले अरुणाञ्चलमा पत्रकारहरुसँग भनेका छन् ।
लामाले सन् १९५९ का अरुणाञ्चल प्रदेश भएर नै भारत आएको हुनाले भावनात्मक सम्वन्ध रहेको समेत बताएका छन् । उनले अरुणाञ्चल प्रदेश आफ्ना लागि विशेष ठाउँ रहेको समेत बताउँदै आएका छन् ।
भारतले किन खेल्दैछ दलाइ लामा कार्ड ?
तर, पछिल्लो समयमा स्पष्टरुपमा भारतले दलाई लामा कार्ड प्रयोग गरेको स्पष्टरुपमा देखिन्छ । यसले स्पष्ट रुपमा के देखाउँछ भने आफ्ना केही एजेण्डाहरुमा चीनसँगको बार्गेनिङका लागि भारतले दलाई लामा कार्डको प्रयोगलाई तिव्रता दिएको छ ।
यो कार्डको माध्यमले चीनलाई दबाव दिएर उसले आफ्ना केही सरोकारहरुमा चीन सहमत होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।
उसो त अरुणाञ्चल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्दुले अरणाञ्चल प्रदेशको सीमा चीनसँग जोडिएको नभई तिब्बतसँग जोडिएको समेत बताएका छन् । भारतीय नेताहरुको यो भनाइलाई कतिपयले भारतले एक चीन नीतिप्रति प्रश्न गरेको रुपमा लिएका छन् ।
चीन सरकारसँग नजिक रहेको ग्लोवल टाइम्समा बुधबार प्रकाशित एक टिप्पणीमा मोदी सरकारले दलाई लामाको विषयमा यस अगाडिको सरकारले भन्दा फरक अडान लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सो पत्रिकाले भारतलाई गलत कामहरु तत्काल रोक्न तथा चीन र भारतको सम्वन्धलाई रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।
आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनसँगको सम्वन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि केही पहलहरु लिए पनि त्यसमा सफल भएका छैनन् ।
आफ्नो एकपछि अर्काे एजेण्डालाई बेइजिङले रोक्न खोजेको भारतको बुझाइ छ । त्यसैले बेइजिङमाथि दबाव सिर्जना गर्ने एउटा अस्त्रका रुपमा उसले दलाइ लामालाई लिएको छ ।
भारतमा यतिवेला एउटा जर्वरजस्त तर्क छ – चीनले आफ्नो स्वार्थमा धक्का दिन्छ र अगाडि बढ्न दिँदैन भने दलाई लामा कार्ड किन प्रयोग नगर्ने ?
चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले स्पष्टरुपमा भारतले यस अगाडिका सरकारहरुले भन्दा मोदीको सरकारले दलाई लामालाई बढी प्रयोग गरेको उल्लेख गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, चीन सरकारसँग निकट रहेका सञ्चारमाध्यमहरुले यसलाई स्पष्टरुपमा भारतको बार्गेनिङ औजारका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा भारतमा दलाई लामाको गतिविधि तिव्र रुपमा बढेर गएको छ । केही महिना अगाडि भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवको गैरसरकारी संस्था इन्डिया फाउन्डेसनले दलाइ लामाको भिडियो सन्देशसहित निर्वासित प्रधानमन्त्रीका उपमासहित गोवामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
सो कार्यक्रममा अन्य देशका नेताहरु लगायत नेपालबाट पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहभागिता जनाएका थिए, जसको आन्तरिक रुपमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।
त्यसैगरी भाजपा निकट रहेका संस्थाले गर्ने अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि दलाई लामाका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने क्रम बढेकै देखिन्छ ।
भारत र चीनका वीचमा अहिले रहेको सबैभन्दा पेचिलो विषय पाकिस्तान हो । पाकिस्तानले आतंकवादीलाई तालिम तथा प्रश्रय दिएको भारतको आरोप छ । त्यसैले चीनले पाकिस्तानको आलोचना गरोस् र यो मुद्दामा आफुलाई सहयोग गरोस् भन्ने भारतको चाहना छ ।
तर, चीनले निरन्तररुपमा पाकिस्तानलाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोग गरेर आफूविरुद्ध उचालेको भारतको बुझाइ छ । उता चीनले भने भारत र पाकिस्तानवीचका विवाद दुई पक्षीय विषय भएको र दुई मुलुकले नै आपसमा समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यससँगै जोडिएको अर्काे विषय हो- चीन र पाकिस्तानवीचको इकोनोमिक करिडोर, जुन विवादित भूमि काश्मीर भएर जाने गर्छ । यसलाई भारतले आफ्नो सार्वभौसत्तामाथिको आक्रमण भनेको छ । त्यसैले सो परियोजनालाई रोक्नका लागि भारतले चीनलाई निरन्तररुपमा आग्रह गरे पनि पाकिस्तान र चीन सो परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि दृढ देखिन्छन् ।
विश्लेषकहरुका अनुसार चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षामा गम्भीर नदेखिएका कारण भारतले तिब्बतको विषयलाई उचालेर चीनमाथि दबाव दिन खोजेको हो ।
न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप
भारतले विगत दुई वर्षदेखि न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्यता लिन खोजिरहेको छ । तर, यसमा चीनले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ । यस विषयमा दुई देशका विचमा धेरैपटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।
भारत र चीनबा वीचमा यस्ता धेरै विषयहरु रहेका छन् । विशेषतः भारतको बुझाइमा चीनले आफूलाई अगाडि बढ्न नदिएको र एशिया क्षेत्रको साँढे बन्न लागेको भन्ने छ ।
नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यतिखेर भारत र चीनको वीचमा बढ्दो तनावले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरुमा पार्ने असरका बारेमा समेत बेइजिङ र दिल्लीमा बहस शुरु भएको छ ।
भारत र चीन दुबै यतिबेला छिमेकी मुलुकहरुमा आफ्नो सैन्य तथा आर्थिक प्रभ्ाावलाई बढाउन तल्लीन छन् । भारत र चीनको वीचमा बढ्दो तनावले छिमेकी मुलुकहरु भने झन चेपुवामा पर्ने विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
अहिले नै नेपाललगायत श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, मादिभ्स लगायतका देशहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि भारत र चीन दुबै तल्लीन छन् । त्यसैले पनि चीन र भारतको सीमा जोडिएका साना मुलुकहरुका वीचमा त्रिपक्षीय साझेदारीको अवधारणा अगाडि आइरहेको छ ।